Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Martinique Breaking » Martinique gara n'ihu mkpọchi, na -agwa ndị njem nleta ka ha pụọ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ Martinique Breaking • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Prefecture nke Martinique tụrụ aro ka ndị njem nlegharị anya na -enweghị ọgwụ mgbochi ghara ịnọgide na ọnụnọ ha.
Ndị isi mpaghara Martinique nabatara usoro ọhụrụ na Mọnde Ọgọstụ 9.
Martinique kwupụtara mkpọchi emechiri emechi malite na Tuzdee, Ọgọst 10, n'elekere 7:00 nke abalị.
Njikwa njem nlegharị anya nke Martinique akọwapụtala na ọnọdụ adịghị ọcha maka ezinaụlọ nọ n'ọnọdụ kacha mma.
Ndị isi mpaghara Martinique nabatara usoro ọhụrụ na Mọnde, Ọgọst 9, na -eguzobe mkpọchi siri ike na Martinique ruo oge izu atọ, malite na Tuesday, Ọgọst 3, n'elekere 10:7 nke abalị.
N'iburu ọnọdụ ahụ n'uche, Ọchịchị Martinique atụwo aro ka ndị njem nleta na -adịghị ike na ndị a na -agba ọgwụ mgbochi ghara ịnọgide na ọnụnọ ha.
The Njikwa Njem Nleta Martinique akọwapụtala na ọnọdụ ịdị ọcha adịghịzị ezute maka ọnụnọ n'ọnọdụ kacha mma.
Agbanyeghị, a gaghị emechi ụlọ obibi na nhazi n'oge mkpọchi a. Ya mere, ndị ọbịa ga -enwe oge ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịtụle ihe ha ga -eme, mgbe ha na -agbaso usoro ịdị ọcha ọhụrụ ahụ. A na -achịkọta ikike njem nlegharị anya nke Martinique ịza arịrịọ ndị ọbịa maka ozi yana inye aka maka ọpụpụ n'agwaetiti ahụ.
Ụlọ oriri na ọ platformsụ platformsụ na ebe mgbazinye ezumike na-enye usoro mgbanwe, enweghị ọnụ ahịa na kagbuo ahaziri maka nsogbu a. Ke adianade do, anọ isi ụgbọ elu na -eje ozi Martinique ugbu a (Air France, Air Caraïbes, Corsair na Air Belgium) emegharịala atụmatụ ụgbọ elu ha iji nyere ndị na -eme ezumike France na Belgium aka ịhazi ọpụpụ ha na ụbọchị na -abịa. Air Caraïbes ga-ewe ihe ruru njem atọ kwa ụbọchị n'etiti Fort-de-France na Paris.
N'akụkụ Air France, a ga-arụ ụgbọ elu atọ kwa ụbọchị na Ọgọst 11 na 12 site na Fort-de-France, mgbe ahụ ụgbọ elu abụọ kwa ụbọchị site na Ọgọst 13 ruo 15. Ruo ụbọchị Wenezde, ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe nke ka elu. ikike (ihe ruru 160 ndị njem ọzọ). Na mgbakwunye, ndị njem niile emebere nloghachi ha n'ọnwa Ọgọst 22 na ndị chọrọ ịlaghachi France tupu Ọgọst 15, ga -enwe ike ịhazigharị ọpụpụ ha na akwụghị ụgwọ ọ bụla.
Banyere njem US na -aga ma na -ala Martinique, American ụgbọ elu ga-amaliteghachi ụgbọ elu na-akwụsịghị akwụsị site na Miami gaa Fort-de-France na mbido Nọvemba afọ a.
Mba Malli ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 14, 2021 na 06:59
Martinique emeela nhọrọ dị mma ebe a, n'ihi na ọrịa ọjọọ a na -ekwe nkwa na ọ ga -adị ogologo oge ọ gwụla ma emere ngwa ngwa ịgba ọgwụ mgbochi.
Covid-19 ga-aga n'ihu na-ewepụta mgbanwe ọhụrụ (ugbu a ọ bụ Delta na Lambda) belụsọ na anyị nwere ike belata oke ọnụọgụ ọrịa. Imirikiti ndị mmadụ amaghị ogologo oge ọrịa na -efe efe sitere na ihe otiti bubonic wee gaa n'ihu. Ha kpochapụrụ ọtụtụ ndị bi na oge ha siri ike, mana ha gara n'ihu na -egbu ndị mmadụ ebe ọ bụla ha hụrụ mgbe ahụ ruo afọ 200 na mgbe ụfọdụ karịa.
Debe Martinique. Ọ bụ agwaetiti dị ebube!